Canada is encouraging donations and boosting government support of cyclone relief efforts in Burma while condemning an extension of Nobel Laureate Aung San Suu Kyi's detention byayear.
Minister of International Cooperation Beverley Oda announced on Monday that the Canadian government will extend its matching funds program from June6to June 13 and roll back its start date to May2from May 15.
May2was the day Cyclone Nargis struck the Irrawaddy Delta in the south of Burma, now called Myannmar by the ruling military junta. The cyclone left an estimated 2.4 million people destitute and 134,000 more missing or dead.
"Many people expect this disaster will lead to political change in Burma," says Tin Maung Htoo, executive director of Canadian Friends of Burma.
However, the regime continues to block the large-scale international relief operation that has been launched and this has drawn the world's attention, adds Maung Htoo.
The military junta has always been "suspicious of foreigners and very, very paranoid," he says. Police impose restrictions and difficulties on foreign aid workers, confiscating relief supplies, detaining donors, and impounding their vehicles.
Onlyafew aid workers have been allowed to enter Burma and the area they have permission to reach is very limited, says Maung Htoo.
"Aid workers cannot reach some places where people have the hardest difficulties in terms of the cyclone in the villages." Speaking atasecurity council debate on the protection of civilians in armed conflict, John McNee, the Canadian ambassador to the UN, said states that block aid should be taken to task, according toaNational Post report. "Those who refuse access cannot be allowed to act with impunity," he said. "Enhanced accountability, underscored byaclear demonstration by the council that systematic denial of access will not be tolerated, is more important than ever." In addition, an international outcry erupted this week when the military junta again extended the detention by one year of Suu Kyi, leader of the National League for Democracy. The junta refused to recognize Suu Kyi's landslide election victory in 1990 who has since then spent more than 12 years under some form of detention.
Inastatement released Wednesday, Foreign Affairs Minister David Emerson said "Canada condemns [the] extension of Aung San Suu Kyi's house arrest" and called for her immediate release.
Meanwhile,afire in the visa section of the Burmese embassy in Bangkok, Thailand on Tuesday may have destroyed the passports of hundreds of aid workers applying for visas to enter Burma. News reports stated that the fire was caused by an electrical shortage, but it would not be unreasonable to assume that it wasapolitical tactic to delay the visa process, Maung Htoo alleges.
Yet he noted that the military junta "knows that if they don't allow aid workers to come in to help the people without any food, water, or shelter, it would beadisaster for them in terms of holding onto power."
Burma's senior general Than Shwe last week promised visiting UN Secretary-General Ban Ki-moon that the regime would allow all aid workers full access to the delta.
Although Maung Htoo says no progress on the relief efforts have yet been seen, he noted the junta also recognizes that "the international call for the Responsibility to Protect is getting stronger and louder and it could lead to some kind of action by the international community."
Earlier this month French Foreign Minister Bernard Kouchner suggested that the UN Security Council invoke Responsibility to Protect (R2P), an international security and human rights doctrine conceived by former Canadian foreign minister Lloyd Axworthy in the aftermath of the horrors of Kosovo and Rwanda.
Adopted by the U.N. in 2005, R2P maintains that the international community hasaresponsibility to protectapopulation suffering serious harm ifacountry cannot or will not protect its own people.
While R2P — which addresses genocide, war crimes, ethic cleansing, and crimes against humanity — does not specifically refer to natural disasters, there is support to apply it to help aid to the victims of the Burma cyclone, including from Mr. Axworthy.
Maung Htoo urges Canada to take the lead, along with likeminded countries such as France, the U.S., and the U.K., to push R2P forward.
"Canada's support is quite strong both in the relief effort and on the political front," he says. In addition to the incentive of matching funds to increase individual donations, Canada has committeda$14 million contribution.
And according toaNational Post report, Canadian ambassador to the UN John McNee has called on the UN Security Council to punish countries that block humanitarian aid. Calling the crisis in Burma "a matter of life and death," he said that "those who refuse access cannot be allowed to act with impunity."
"This is the opportune time for the international community to step in," says Maung Htoo.
"This relief effort isapriority for all of us," he said, but "at the same time it isavery temporary measure while Burma needsalong-term solution … to have change inside the country politically too."
The humanitarian effort and R2P can pave the way for political change, and currently "it's quite clear… we have some substance with which we can increase our pressure," Maung Htoo says.
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/30/20080အကြံပြုခြင်း
မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်များအတွက် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ သုံးစွဲမည်
မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်ခဲ့တဲ့ ဒေသတွေကလူတွေကို သူတို့နေရပ်တွေဆီ အချိန်အခါမသင့်သေးဘဲ အတင်းအကျပ်ပြန်ပို့ တာမျိုးကို ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ အတည်ပြု ထောက်ခံချက်မပေးပါဘူုးလို့ ကုလသမဂ္ဂ တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒီလို လုပ်တာဟာ နောက်ထပ် ဘေးအန္တရာယ်တွေကို ကြုံတွေ့ရစေနိုင်တယ်လို့လည်း သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဘန်ကောက်ရောက် ဗွီအိုအေ၀ိုင်းတော်သား ကိုကျော်ကျော်သိန်းက ဆက်ပြောပြပါမယ်။
မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်လူထုကို ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ တဖြည်းဖြည်း အရှိန်မြင့်လာတာနဲ့အမျှ မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်လူထု ကိုယ့်ရပ်ကိုယ်ရွာပြန်ပြီး မိမိတို့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဘ၀တွေ ပြန်တည်ဆောက်နိုင်ရေးဟာ အတော့်ကို အရေးကြီးတဲ့ အခြေ အနေမှာ ရောက်နေပြီလို့ ပြောခဲ့သူကတော့ ကုလသမဂ္ဂ လူသားဘေးဒုက္ခဆိုင်ရာ ကူညီကယ်ဆယ်ရေးရုံး OCHA ရဲ့ အာရှဒေသ ညွှန်ကြားရေးမှူး မစ္စတာ တာရီယဲ စကာ့ဗ်ဒါးလ် (Terje Skavdal) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ မိမိသဘောနဲ့မိမိဖြစ်ရမယ်၊ တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ရမယ်လို့ သူက ထောက်ပြလိုက်ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကတော့ အတင်းအကျပ် နေရပ်ရင်းပြန်ခိုင်းတာမျိုးကို မထောက်ခံပါဘူးတဲ့။
“ဘာထောက်ပံ့မှု၊ ဘာဝန်ဆောင်မှုမှမရှိဘဲ ပြန်ခိုင်းတာမျိုးကို ကျနော်တို့ မထောက်ခံပါဘူး။ လူတွေကို ပြန်လည်နေရာချထားရာ မှာ ကူညီ ထောက်ပံ့ဖို့လိုပါတယ်။ သူတို့နေရပ်တွေဆီ မပြန်ခင်မှာကို ကျေနပ်လောက်ဖွယ်ရာ အခြေအနေတွေ ဖန်တည်းပေးဖို့ လိုပါတယ်။ လူတွေကို အင်အားသုံးပြန်ပို့တာမျိုးကို လုံးဝ လက်မခံပါဘူး။ ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အာဏာပိုင်တွေကို ကုလသမဂ္ဂ က ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောထားပြီးပါပြီ။ ကျနော်တို့ ဆက်ပြီး စောင့်ကြည့်သွားပါမယ်။” လို့ မစ္စတာ တာရီယဲ စကာ့ဗ်ဒါးလ်က ပြော သွားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မကြာသေးခင် ရက်ပိုင်းကမှ မြန်မာနိုင်ငံက ပြန်ရောက်လာခဲ့တဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ကလေးသူငယ်များ အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ရဲ့ အာရှဒေသ ညွှန်ကြားရေးမှူး မစ္စ အနုပါမာ ရောင် ဆင်းဂ် (Ms. Anupama Rao Singh) ကလည်း အချိန်အခါ မသင့်ခင် လူတွေပြန်ပို့တာဟာ အတော်လေး အန္တရာယ်ရှိပါတယ်လို့ သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
“လူတွေကို အချိန်အခါမသင့်ခင် ပြန်ပို့တာ၊ ပြန်လည်နေရာချထားတာဟာ အတော်လေး စိုးရိမ်ဖွယ်အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ မိမိထင် ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လည်းဆိုတော့ နေရာဒေသ စတုရန်းမိုင် ရာပေါင်း ထောင်ပေါင်းများစွာဟာ လုံးဝ ရေလွှမ်းမိုးနေပါတယ်။ လူ တွေပြန်သွားရင် တကယ့်အန္တရာယ်က ဘာလဲဆိုတော့ သူတို့နေရာတွေမှာ အသက်ကယ် ထောက်ပံ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကို မရ တော့မယ့်အခြေအနေပါ။ ဒါ့ကြောင့် မိမိတို့အားလုံးဟာ ရောဂါဘယတွေနဲ့ ကပ်ဘေးတွေကျရောက်မယ့် ဒုတိယလှိုင်းနဲ့ တကယ့် ကို ရင်ဆိုင်ကြရပါမယ်။” လို့ မစ္စအနုပါမာက အလေးအနက် သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်လူထုအတွက် ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေ လုပ်ဆောင်ရေးမှာ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရကြား သဘောတူညီမှုတွေ ရရှိခဲ့တာ သီတင်းတပတ်ကြာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ကုလသမဂ္ဂတာဝန်ရှိသူတွေဟာ မြစ်ဝ ကျွန်းပေါ်ဒေသကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် သွားရောက်နိုင်ရေးရဲ့ အရေးကြီးပုံကို ဆက်ပြီးတော့ ထောက်ပြ ပြောဆိုနေရဆဲပဲရှိပါသေးတယ်။ မစ္စတာ တာရီယဲ စကာ့ဗ်ဒါးလ် က -
“နိုင်ငံတကာကြက်ခြေနီနဲ့ လခြမ်းနီအသင်းများအဖွဲ့ချုပ် IFRC က ကျွမ်းကျင်သူတွေအပါအ၀င် အစိုးရမဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ အစည်းတွေက ကျွမ်းကျင်သူတွေ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသဆီကို ဗျူရိုကရေစီယန္တယား အတားအဆီးတွေမရှိဘဲ မြန်နိုင်သမျှ မြန်မြန် ပိုပြီးတော့ အရေအတွက်များများ သွားနိုင်တာကို ကျနော်တို့မြင်လိုပါတယ်။” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ၀န်ထမ်းတွေ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသသွားရောက်နိုင်ရေးအတွက် ကြိုတင်ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းခံရမယ့် ကာလကို သီတင်း နှစ်ပတ်ကနေ နှစ်ရက်အထိ အစိုးရကလျှော့ချပေးခဲ့ပေမယ့် အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက် ဘယ်လောက်ကြာမယ် ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိပါဘူး။
နိုင်ငံတကာကအကူအညီတွေကို မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်လူထု ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရရှိနိုင်ရေးမှာ အာဏာပိုင်တွေ ကြောင့် နှောင့်နှေးမှုတွေကြုံနေရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေခဲ့တာကလည်း ရက်အတန်ရှိပါပြီ။ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ နိုင်ငံ တကာ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေဟာ ဒီအချက်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ၀န်ခံပြောကြားမှုမရှိပေမယ့် သူတို့ ပြောသလောက် မှာကိုပဲ အဟန့်အတားတွေရှိနေတယ်ဆိုတာ ပေါ်လွင်နေပါတယ်။
နိုင်ငံတကာကြက်ခြေနီနဲ့ လခြမ်းနီအသင်းများအဖွဲ့ချုပ် IFRC ရဲ့ အရေးပေါ်အမိုးအကာ ထောက်ပံ့ရေးကဏ္ဍ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေး မှူး မစ္စတာ ဂရက်ဂ် မက်ဒေါ်နယ်လ်ဒ် (Mr.Gregg McDonald) က အမိုးအကာတွေဖြန့်ဖြူးနိုင်ရေးဟာ မိမိတုိ့ကိုပေးထားတဲ့ ခွင့်ပြုချက်အတိုင်းအတာပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် နောက် သီတင်းခြောက်ပတ်အတွင်းမှာ မုန်တိုင်းသင့်လူထုရဲ့ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းဆီကို ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်တဲ့။
“ပြည်တွင်းမှာ ဖြန့်ဖြူးရေးဟာ စိန်ခေါ်မှုတရပ်အဖြစ် ရှိနေပါသေးတယ်၊ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကလည်း နိမ့်နေဆဲပါ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအဖွဲ့ရဲ့ အကျယ်ပြန့်ဆုံးကွန်ယက်နဲ့အတူ အဖွဲ့တွေဟာ သွားလာခွင့်တွေ ပိုရလာနေကြပါပြီ။” လို့ဆိုပါတယ်။
ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့မှာ ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်တော့မယ်လို့ အစိုးရကကြေညာထားတဲ့အတွက် ယူနီဆက်ဖ်အနေနဲ့ မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ကလေးသူငယ်တွေ ပညာသင်နှစ်တနှစ်လုံး လွတ်မသွားစေဖို့ ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ မစ္စ အနုပါမာကပြောပါတယ်။
“ကလေးသူငယ်တွေအတွက် ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ ဘယ်လို နှောင့်နှေးမှုမျိုးမဆို၊ ပညာသင်နှစ်တနှစ်လုံး လွတ်သွားနိုင်ခြေ ရှိနေတာမျိုးဟာ ကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက် မကောင်းပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေ ပြန်လည် ထူထောင် ရေးကို ဦးစားပေးအဖြစ် မိမိသတ်မှတ်ပါတယ်။” လို့ မစ္စအနုပါမာက ပြောသွားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံနေရတဲ့ လူသားဘေးဒုက္ခကပ်ကြီးဟာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ အာချေးဒေသမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ အတိုင်းအတာ ပမာဏနဲ့ အတော့်ကို တူတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လက်တွေ့ လုပ်ကိုင်ရတဲ့အခြေအနေချင်းသာ မတူတာပါတဲ့။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ကူညီ ကယ်ဆယ်ရေးအဆင့်ဟာ ပြီးမသွားသေးဘူး၊ နောက်ထပ် လအတော်ကြာ ဆက်သွားရဦးမယ်ဆိုတာကို ကုလသမဂ္ဂ တာဝန်ရှိသူ တွေအားလုံးက ပြောနေကြတာပဲဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျား။
ဒဏ်ခံလိုက်ရတဲ့ ဒေသများအတွက် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ အကုန်ခံပြီး
WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ လုပ်ကိုင်မယ့်အေဂျင်စီများက ကျန်းမာ
မှုလုပ်ငန်း ၅၀% လောက် ပျက်စီးသွားလို့
အဲဒီငွေများနဲ့ လာမယ့် ၆ လမှာ ပြန်လည် ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ WHO က ကြာသပတေးနေ့မှာ
လေဘေးဒုက္ခသည် ၂,၄၀၀,၀၀၀ လောက်ဟာ သောက်ရေ၊ အစားအစာနဲ့ ဆေးဝါး
များ မရကြသေးလို့ ကူးစက်ရောဂါများ ဖြစ်ပေါ်မလာရေးကိုလည်း ကြိုးပမ်းသွားမယ်
လို့ WHO ကဆိုပြီး လုပ်ငန်းတခုလုံးအတွက် ဒေါ်လာ ၂၈ သန်း လိုအပ်လိမ့်မယ်လို့
ကုလသမဂ္ဂ ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်း အားလုံးအပါအ၀င် နိုင်ငံခြားကျွမ်းကျင်သူ
အတော်များများအား စစ်အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ၀င်ခွင့်ဗီဇာများ ပိုမိုထုတ်ပေး
နေပြီဖြစ်ကြောင်း ထောက်ပံ့ရေးအေဂျင်စီများက ဆိုပါတယ်။
လေမုန်တိုင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဓိကစပါးစိုက်ပျိုးရာ ဧရာဝတီတိုင်း ပျက်စီးသွား
လို့ စားနပ်ရိက္ခာအထောက်အပံ့ အနည်းဆုံး တနှစ်လိုအပ်လိမ့်မယ်လို့ FAO ကမ္ဘာ့
စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့က ဆိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး
အတွက် နိုင်ငံခြားအထောက်အပံ့ ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလီယံပေးကြဖို့ စစ်အစိုးရက
The ruling junta, disappointed that international aid pledges for cyclone relief added up to $150 million, rather than the $11 billion it asked for, insisted that survivors could get by without foreign handouts. “People from the Irrawaddy Delta can survive on their own, even without bars of chocolate donated by the international community,” said the government-run Myanma Ahlin newspaper, adding that they could live on “fresh vegetables that grow wild in the fields and on protein-rich fish from the rivers.” No aid agency is known to be distributing chocolate bars.
The commentary also criticized an unidentified monetary institution’s “act of inhumanity,” saying it had refused to help survivors. Last week, Juan José Daboub, the managing director of the World Bank, said the bank would not extend any financial aid to Myanmar because it had not paid its debts foradecade. Still, the United Nations reported that dozens of visas had been approved for international relief workers to enter the country, and that more were being allowed into the delta, which had been off limits to Westerners since the storm left 1.5 million survivors homeless.
Myanmar appoints Deputy FM as Chairman representing Myanmar in tripartite core group
YANGON, May 30 (Xinhua) -- Myanmar Friday appointed its Deputy Foreign Minister U Kyaw Thu as Chairman representing the country inaYangon-based tripartite core group, the State Radio quoting the National Disaster Preparedness Central Committee reported.
The tripartite core group, also comprising representatives from the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the United Nations, isaworking mechanism for coordination, facilitating and monitoring the flow of international assistance into Myanmar cyclone-hit areas.
The core group was established at an ASEAN-UN international pledging conference held in Yangon last weekend, attended by 51 countries and 24 UN organizations and international non-governmental organizations following the establishment of an ASEAN Humanitarian Task Force led by the ASEAN Secretary-General Surin Pitsuwan.
The task force is beginning work immediately to ensure full information exchange, close coordination, relief and recovery efforts and resolution of any problems which may arise.
The 51 participating countries pledged in the conference their determination to help Myanmar overcome cyclone tragedy and resume their normal lives as quickly as possible. They said this event was an important exercise towards buildingagreat trust, confidence and cooperation between Myanmar government and the international community.
The international community is ready to consider helping Myanmar government for longer term as Myanmar made clear the scale of the rehabilitation, reconstruction and recovery efforts likely to be needed and the immediate requirement to ensure that farming and fishing activities could be resumed as soon as possible, not least to ensure that as much rice as possible can be planted in the forthcoming planting season.
The ASEAN-UN international pledging conference was held to seek further international financial aid commitment for Myanmar's cyclone aid relief and rehabilitation efforts.
The conference, hosted by Myanmar, was attended by Myanmar Prime Minister General Thein Sein, ASEAN Secretary-General Surin Pitsuwan, UN Secretary-General Ban Ki-moon, ASEAN Chairman and Singapore Foreign Minister George Yeo and Chinese Foreign Minister Yang Jiechi along with other delegates from ASEAN member states, donor countries as well as those from UN agencies, international financial institutions and non-governmental organizations.